စိတ်တိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ ? - Myanmarload
စိတ်တိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 21:48 July 03, 2017
လူတိုင်းနီးပါ စိတ်တိုဖူးပါတယ်။ စိတ်ကို အလိုလိုက်မိလို့ အမှားပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလို မဖြစ်ရအောင် စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြင်ပ အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ရှိအခြေအနေအရပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေ့ရင် စိတ်တိုတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘက်က မမှားဘဲ စွပ်စွဲခံရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း စိတ်တိုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကိုသာ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် (သို့) စိတ်ကိုသာ အနိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင် တိုးတက်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်း လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။
စိတ်တိုရင် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို တစ်ပါတည်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁) လက်ရှိအခြေအနေကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ။
ခက်ခဲပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို မေ့ပစ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် စိတ်တိုစရာဖြစ်လာရင် လတ်တလော မေ့ပစ်လိုက်တာကြောင့် စိတ်တိုတာကို သက်သာစေမှာပါ။ မသိသလိုနေပြီး အခု အခြေအနေကနေ ခဏလေး ရုန်းထွက်လိုက်ပါ။
၂) စိတ်ခံစားမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှု ကွဲပြားပါ။
စိတ်ကို အလိုလိုက်မိလို့ (သို့) စိတ်တိုနေတာကို ချက်ချင်း တုံ့ပြန်မိလို့ မှားခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ သာဓကတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် စိတ်တိုနေချိန်မှာ ဘာကိုမှ ချက်ချင်း မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ အမှားနဲ့ အရမ်းနီးစပ်လွန်းတာမို့ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း မတုံ့ပြန်မိဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
၃) အကြောင်းရင်းကို တွေးပါ။
ဘယ်အရာက ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးစေတာလဲ? ဘာကြောင့် စိတ်ဆိုးရတာလဲ? စသည်ဖြင့် အကြောင်းရင်းကို သေသေချာချာ တွေးပါ။ ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပါ။ တစ်ဖက်သားကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်က မလိုအပ်ဘဲ စိတ်တိုမိနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄) လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါ။
လေ့ကျင်းခန်းလုပ်ရင်း အာရုံပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သင့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိတာမို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း သင့်စိတ်ကို ဖြေလျော့လိုက်ပါ။
၅) အလုပ် တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါ။
အိမ်မှာဆိုရင် အိမ်အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်လိုက်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင် အလုပ်တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါက သင့်အတွက် အလုပ်ပြီးစေသလို စိတ်တိုမှုကိုလည်း ပြေလျော့ စေပါတယ်။
၆) ယုံကြည်ရသူကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။
ဒီလို တစ်ဖက်သားကို ပြောပြလိုက်ရလို့ သင့်ရင်ထဲမှာ ပေါ့သွားနိုင်ပါတယ်။ မိမိယုံကြည်ရသူနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အကြံဉာဏ်ကောင်း ရယူသည်ဖြစ်စေ၊ တိုင်ပင်သည်ဖြစ်စေ မိမိ ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်ပါ။
သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစားမှု သီချင်းလေးတွေ နားထောင်လိုက်ပါ။ သိသိသာသာကို စိတ်တိုမှုကို လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။
၈) စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးလိုက်ပါ။
ဒီအချက်ကတော့ အကောင်းဆုံး နည်းလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ လူတစ်ဦးကိုပြောပြလိုက်ရင်တောင် သူကသာ စကားတွေ ရှုပ်နေမယ်ဆို ပြသနာက ထပ်ရှင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးသော မိတ်ဆွေက စာအုပ်နဲ့ ဘောပင်လ် လို့တောင် ပြောလို့ ရသည်အထိ သူတို့ကို ခင်မင်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ချိန် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာတွေ ပြန်ဖတ်ရင် တစ်ချို့ စိတ်ဆိုးစရာ အချက်တွေက ရယ်စရာတွေတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၉) ဟာသ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်ခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်သောကတွေကို လျော့နည်းစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်တိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ဟာသ ဇာတ်လမ်းတိုလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ကားလေးဖြစ်ဖြစ် သတိထားပြီး ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
စိတ်တိုခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မကောင်းသလို လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း သင် စိတ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနီးနားမှာ ရှိတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ့်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကြိုးစားပြီး စိတ်တိုမှုတွေ၊ သောကတွေကို ဖြေလျော့ကြရအောင် ….